४ कारोड बजेट कम भयो भन्दै सांसद महत प्रतिनिधिसभा बैठकमै रोए « News24 : Premium News Channel
४ कारोड बजेट कम भयो भन्दै सांसद महत प्रतिनिधिसभा बैठकमै रोए
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले अपमान गरेको भन्दै सांसद गजेन्द्रबहादुर महत प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै रोएका छन्। बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको अपमान गरेको भन्दै सांसद महत रोएका हुन् ।
सांसद तह लगाउने बजेट सरकारले ल्याएको र अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको अपमान गरेको टिप्पणी उनले गरेका थिए। नेकपाका नेता महतले भने, “ कोही मन्त्री भएँ भन्दैमा हामीलाई बाधेर राख्न पाईन्छ? हामीलाई तह लगाउन पाईन्छ ? हामीलाई अपमानित गर्न पाईन्छ ? हामीलाई वडाअध्यक्षको ठाउँमा लिएर राख्न पाईन्छ? कोही मन्त्री हुदैमा पाईन्छ ? त्यो अधिकार कसैलाई छ चाहिने कुरा गर्नुहोस् न भन्या।”
चार कारोड बजेटले अफूहरूलार्इ अपनमान गरेको भन्दै भने चाहिएको छैन हामीलाई ४ करोड , स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य बसालेर विनियोजन गर्नुपर्ने? कहि मिल्ने कुरा हो ?कसैले सहन्छ ? ” उनले भने, “बजेटको मैले बचाउ गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कमजोर बस्तुको बचाउ गरिन्छ बलियो बस्तुको सायद बचाउ गरिन्न। सितिमिति सायद यो हल्लिदैन। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो तपाईहरूको विरोधले मलाई केही हल्लाउँदैन। मैले त्यही शब्द सापटी लिएँ। विरोधले खासै हल्लिने देख्दिनँ। तर पनि बजेटले मलाई हल्लाइरहेको छ। हुम्लालाई हल्लाईरहेको छ।”
बजेट शहर केन्द्रीत भएको भन्दै उनले कर्णाली र जुम्लालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। उनले भने, “बजेट मेरा लागि आकाशको फल आँखा तरी मर, लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै, न घरको न घाटको, न हर्ष न विस्मात छ। मेरा लागि र मेरो जुम्लाका लागि।” रोजगारीको जिम्मा सबै बैंकलाई र स्वास्थयको जिम्मा बिमा संस्थानलाई दिने सरकारको निति गलत भएको टिप्पणी गरे।